एन्ड्रोइड फोन तथा ट्याबलेटमा, नेपाली टाइप गर्नको लागि, हाम्रो नेपाली किबोर्ड लगायत अन्य केही नेपाली किबोर्डहरु प्लेस्टोरमा भेट्न सकिन्छ । तर सानो 'स्कृन' भएका फोन प्रयोगकर्ताहरुलाई त्यही किबोर्डहरु पनि चलाउन गाह्रो परिरहेको देखिन्छ, कतिलाई बानी नभएका कारण नेपाली टाइप गर्नै झन्झट लाग्छ। तर, नेपाली टाइप आउँदैन भने पनि चिन्ता नलिनुस्, अब गुगल'ले, मोबाइलमा नेपाली लेख्न झनै सजिलो बनाइदिएकोछ ।
एन्ड्रोइडको लागि, यो हप्ताबाट गुगलको अर्को नयाँ किबोर्ड 'हेन्ड राइटिङ इनपुट' थपिएको छ, यो किबोर्ड चलाउँदा, टाइप गर्नु पर्दैन । कापीमा कलमले जसरी नेपाली लेखिन्छ, त्यसैगरि मोबाइलमा खरर नेपाली लेख्नसकिन्छ । हामीले यो किबोर्डमा लेखेको कुरालाई, गुगल'ले अटोमेटिक रुपमा 'ट्रान्सलेट' गरिदिन्छ । हामीले नेपाली अक्षर लेख्ने तरिका देखि लिएर नेपाली अक्षरको बनोट आदि विविध कुराहरु वर्षौँ अध्ययन गरेर गुगल'ले यो इनपुट टुलको निर्माण गरेको हो। गुगल रिसर्च ब्लगका अनुसार, 'हेन्ड राइटिङ इनपुट' किबोर्ड, नेपाली सहित ८२ भाषामा उपलब्ध छ।
हातले लेखेको ट्वीट परिक्षण । टाइप गर्नु पर्दैन…
फोनको सुरक्षाको हिसाबले, 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' प्रयोग गर्नै पर्ने 'फिचर' हो। फोन हराएको खन्डमा, 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' को ड्यासबोर्डबाट आफ्नो फोन, खोज्न सकिन्छ, 'लक' गर्न सकिन्छ, अनि फोनमा भएका 'डेटा' सबै मेट्न पनि सकिन्छ। तपाईको फोन सँधै अनलाइन नहुनसक्छ वा 'लोकेशन अन' नभएको खन्डमा, गुगल'ले तपाईको फोन भएको अन्तिम 'लोकेसन' देखाउँछ । गुगलमा सर्च गर्दा तपाई आफ्नो गुगल एकाउन्टमा 'साइन इन…
गुगल ट्रान्सलेट, जिमेल हुँदै युट्युब पनि अब नेपाली भाषामा उपलब्ध भएकोछ । नेपाली भाषा वा भनौँ देवनागिरी लिपी मात्र बुझ्ने कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले इन्टरनेटमा अब सजिलै युट्युब चलाउन सक्नेछन् । युट्युब नेपाली भाषामा भन्नुको मतलब, युट्युब साइट नेपाली भाषामा हुनेछ, तर युट्युबमा रहेका भिडियोहरु यथावत रहनेछन् ।
गुगल र नेपाली स्वयंसेवकहरुको महिनौँको प्रयास पछि, युट्युब नेपाली भाषामा उपलब्ध भएको हो । नेपाली सहित ७५ भन्दा धेरै भाषामा युट्युब उपलब्ध छ। युट्युबमा संसारभरबाट प्रति मिनेट ३०० घन्टा बराबरको भिडियो अपलोड गरिन्छ । डिसेम्बर २०१३ मा गुगल ट्रान्सलेटमा नेपाली भाषा समावेश गरिएको थियो भने, जुलाई २०१४ बाट जिमेल नेपाली भाषामा उपलब्ध भएको थियो।
युट्युब नेपाली भाषामा कसरी प्रयोग गर्ने?
युट्युब पेजको तल रहेको 'सेटिङस्'मा गएर, 'ल्याङ्वेज सेक्सन'मा नेपाली भाषा छान्न सकिन्छ । नेपाली 'क्लिक' गरेपछि, तपाईको लागि युट्युब नेपाली भाषामा उपलब्ध हुन्छ ।
साइटमा, केही ठाउँमा अंग्रेजी शब्दलाई ठाडो नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको अमिल्दो देखिन्छ। जस्तो कि 'प्रेस' (Press) - मिडिया'…
नेपाली गितहरु, साउन्ड क्लाउड, युट्युब आदिमा खोज्दै, सुन्ने गरिएकोछ । तर 'गाना डटकम'मा हिन्दी गितहरु सुन्ने बानी परेकोले, नेपाली गित सुन्नको लागि पनि त्यस्तै एप भइदिए हुन्थ्यो भनेर धेरै पहिले देखि नै लागेको हो। अघिल्लो स्टार्टअप विकेन्ड काठमाडौँमा लिसन् (Lishn) देख्दा रमाइलो लागेको थियो, भन्ने नै हो भने मैले रोहित जोन क्षेत्रीको "बिस्तारै बिस्तारै..." भन्ने गित पहिलो पटक लिसन् मा सुनेको थिएँ (स्टार्टअप विकेन्डमा, परिक्षणको रुपमा लिसन् मा "बिस्तारै बिस्तारै..." सहित अन्य केही नेपाली गितहरु राखिएको थियो)। "बिस्तारै बिस्तारै..." भन्ने गित २०१३ मै आएको भएपनि, मैले ढिलो मात्र सुनेछु, एकपटक सुन्ने बित्तिकै मन पर्यो। सायद युट्युब, साउन्ड क्लाउड आदिमा, आफूले पहिले सुनिसकेका गितहरु मात्रै सुन्दै थिँए । यस्तै कारण पनि, नेपाली गितहरु स्ट्रिमिङ गर्न्ने लिसन् जस्तो साइट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेकोथियो ।
पर्खाइ सकिएको छ, नयाँ वर्षको अवसर पारेर, नेपाली गित-संगित स्ट्रिमिङ साइट लिसन् २५ जना संंगितकर्मीका १ सय २० भन्दा धेरै गित-संगितहरु सहित सुरु भएकोछ । लिसन् मा …
नेपाल र नेपालीलाई लक्षित गरेर बनाइएको एप्स, अन्तराष्ट्रिय पे-मेन्ट गेटवे नभएका कारण, गुगल प्लेस्टोरमा राखेर बेच्न सकिने अवस्था छैन, अत: नेपाली डेभ्लपर्सका लागि एप्समा विज्ञापन देखाउनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन। पहिलो त नेपालबाट गुगल प्लेस्टोरमा एप्स राख्नै समस्या छ, डेभ्लपर खाता खोल्न २५ डलर लाग्नेगर्छ, पैसा तिरेर खाता खोल्छु भन्दा पनि, तिर्ने अप्सन छैन। अनि प्रयोगकर्ताहरुलाई एप्समा विज्ञापन राखेको मन पर्दैन, तर फ्रिमा पाइने एप्स, विज…
आज बाग्मती नदी सफाइ थालिएको एक सय हप्ता, नेपाल टेलिकमले हिजै एसएमएस गरेर आज मानव हाते साङ्लो बनाइने सूचना दिँदै, अभियानमा सामेल हुन आह्वान गरेको थियो । त्यसै अनुसार आज शनिबार, बाग्मती सफाइ अभियान थालिएको सय हप्ता पुगेको अवसरमा सुन्दरीजल देखि चोभारसम्मको २८ किलोमिटर लामो मानव हाते साङलो बनाइएको थियो।
बाग्मती सफाइ अभियानको एक सय हप्ता र हाते साङ्लो बनाइने खबरले, बिहान देखि नै ट्विटरमा बाग्मती सफाइ अभियानको सन्दर्भमा पक्ष र विपक्षमा ट्विटहरु देखिए। ट्विटर सेन्टिमेन्ट एनालिटिक्स इन्जिन, ओपिनिओका अनुसार आज बाग्मतीको सन्दर्भमा लगभग ७ हजारवटा ट्विट गरिएको थियो, त्यसमध्ये करिब ६ हजार ट्विट नेपाली भाषामा गरिएको थियो भने बाँकी १ हजार ट्विट अंग्रेजी भाषामा गरिएको थियो ।
Here is the Sentiment Analysis of tweets related to Bagmati by @TheOpinio .@rSwechha tweet made the most impression pic.twitter.com/EmmWJMHH8X
— Chandan Goopta (@chandangoopta) April 11, 2015
बिहान ६ बजे देखि बेलुका ६ बजेसम्म गरिएका ७ हजार ट्विटहरु मध्ये, करिब ६८ प्रतिशतले बाग्मती अभियान सफाइ अभियानलाई समर्थन गरेका थिए, भने करिब …
जति धेरै साइट र एप्स चलाउछौँ, त्यति धेरै पासवर्ड सम्झनुपर्ने बाध्यता छ । फोन नम्बर नसम्झिने समयमा, त्यति धेरै पासवर्ड कसरी सम्झिने? अझ त्यो भन्दा नि महत्वपूर्ण कुरा, बलियो पासवर्ड कसरी राख्ने या भनौँ बलियो पासवर्ड कसरी बनाउने? जब पनि नयाँ साइटमा साइन अप गर्ने बेला हुन्छ, यही पासवर्ड के राख्ने, कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुराले दिमाग खान्छ ।
साना-ठूला अक्षर, अंक र स्पेशल क्यारेक्टर राखेर बलियो पासवर्ड बनाउनु पर्छ भन्ने सुन्दै र भन्दै आइएको धेरै भयो। पासवर्डको सन्दर्भमा, एचबिओ'को गतहप्ताको 'लास्ट विक टुनाइट' कार्यक्रममा एडवार्ड स्नोडनले, बलियो पासवर्ड बनाउने तरिका बताएका थिए। (एडवार्ड स्नोडन, 'नेसनल सेक्युरिटि एजेन्सी' (एन एस ए), अमेरिका'को गोप्य दस्तावेजहरु 'सार्वजनिक' गरेर चर्चामा आएका व्यक्ति हुन्।) स्नोडनका अनुसार आठ क्यारेक्टरको पासवर्ड कम्प्युटरले सजिलै क्रयाक गर्न सक्छ । अत: पासवर्ड बलियो राख्न, आफ्नो बेग्लै 'पास-फ्रेजेज' बनाउन उनको सुझाव थियो, जुन डिक्सनरीमा नभेटियोस र सजिलै सम्झन पनि सकियोस् । बलियो पासवर्ड कस्तो हुन्छ, यो छोटो ३ मिनेटको भिड…
घरमा प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिङ, फर्निसिङ आदि गर्नुपर्दा, यो विषय सँधै टाउको दुखाइ हुन्छ। मर्मत सम्हार गर्ने मान्छे कहाँ, कता खोज्ने? यस्तै विविध घरायसी समस्याहरुलाई समाधन गर्न, घर मर्मत सेवा सजिलो, छिटो-छरितो र भरपर्दो बनाउन 'डोरस्टेप्स'को 'होम रिपेयर एप' आइपुगेकोछ । घरमा धारा, इन्भर्टर, टेबल - कुर्सी, झ्याल - ढोका आदि बिग्रियो भने के गर्ने भनेर अलमल पर्दै हुनुहुन्छ भने, अब ढुक्कसँगले रिपेयर लेखेर २२०० मा एसएमएस (SMS REPAIR to 2200) पठाउनुस् ।
तपाईले फोन वा एसएमएस मार्फत रजिष्ट्रर गरेपछि, होम रिपेयर एपका एक्सपर्टले तपाईको घरमा आएर निशुल्क समस्याको जाँच गर्छन् । आफूले दिने सेवा भए, होम रिपेयर एपका एक्सपर्टले नै मर्मत सम्हार गरिदिन्छन्, आफ्नो भन्दा बाहिरको काम भए, अरुलाई रिकमेन्ड गरिदिन्छन् ।
होम रिपेयर एप, व्यक्ति/घर र अफिसको लागि गरि दुईवटा छुट्टाछुट्टै स्किममा उपलब्ध छ । होम रिपेयरले घरको लागि बार्षिक २,००० रुपैँयाको 'प्रिपेड' सर्भिस पनि सुरु गरेकोछ, जसमा वर्षभरिमा ३,००० रुपैयाँ बराबरको सेवा पाइने कम्पनीको दाबी छ । निरिक्षण निशुल्क गरिदिँदै आएको कम्पनील…
ट्विटरमा ह्यासट्यागको सुरुवात सन् २००७ मा भएपनि, यसको व्यापक प्रयोग हुन भने केही समय लागेको थियो। ट्विटरको ह्यासट्यागको शैलीलाई इन्स्टाग्राम, गुगलप्लस, फेसबुक आदिले पनि अनुसरण गरिसकेकाछन् । ट्विटरमा चलाइने 'क्याम्पेन', 'ट्विट च्याट' आदिमा ह्यासट्यागको विशेष महत्व रहन्छ । जनमत बुझ्नका लागि पनि ह्यासट्याग महत्वपूर्ण माध्यम हो । अघिल्लो हप्तामात्रै …